घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; 'Piquénbauer'। हाम्रो Gerard Pique बचपन स्टोरी प्लस जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपन समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूरा खाता सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन, सम्बन्ध जीवन, व्यक्तिगत जीवन र उनको बारेमा धेरै थोरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो रक्षात्मक क्षमताहरूबारे जान्दछन् तर जेरार्डिक्स प्रविधिको जीवनीमा केही कम छ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -बाल्यकाल
जेरर्ड पेक्व्ने बर्नबायस बार्सिलोना मा2को 1987nd मा जन्म भएको थियो, स्पेन.
पेक्वेट एक कातालानमा अति धनी परिवारमा उठाइयो। उहाँ अक्सर लोकप्रिय फुटबलरहरूको सूचीमा धनी आमाबाबुको साथमा हुनुहुन्छ। उनको पिता जोआन एक सफल व्यवसायी र वकील हो। उनको आमा, मोन्टसेराट, बार्सिलोना मा एक प्रतिष्ठित स्पाइनल चोट अस्पतालको निर्देशक हो।
लिटिल गेरार्डले पहिले नै त्यो ठीक तरिकाले हिँड्न सक्नु पश्चात एक बललाई ठिकिरहेको थियो। यस्तो खेलको लागि उनको प्रेम थियो कि यो लगभग उनको लागत आफ्नो प्रिय जीवन.
एक 17-महिनाको रूपमा, बार्सिलोना रक्षकले आफ्ना हजुरआमाका घरको छतमा खेल्दै थिए। तपाईंले पहिले नै अनुमान लगाएका हुन सक्नुभएका के भयो। खेल खेल्दा, बल छतमा गए र पीरागेरर पिइकको पीडा पनि साथ भयो।
पूर्व मैनचेस्टर युनाइटेड डिफेंडरलाई तुरुन्त अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो जहाँ उनी एक कोमामा थिए। धन्यबाद, सानो Pique2दिन पछि आफ्नो उत्खनन केहि हदसम्म उठ्यो, आफ्नो परिवार र आफन्तहरूको आनन्दको धेरै। उहाँले मृत्युको विरुद्धमा युद्ध जित्नुभयो।
जेरार्ड पिक- मृत्युको विरुद्धमा युद्ध जोगाउन
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -क्यारियर सारांश
उनले प्रारम्भिक फुटबलमा रुचि राखे र 1997 मा आफ्नो युवा क्यारियर सुरू गरे जब उनले दस वर्षको उमेरमा एफसी बार्सिलोना अकादमीमा प्रवेश गरे।
पिक क्लबमा सबैभन्दा सानो केटाकेटीको टोलीमा प्रवेश भएको थियो जसमा त्यो समय अलिविन बी भनिन्थ्यो। उनी उनीहरूको टोलीको सबैभन्दा बलियो र सबैभन्दा ठूलो रक्षक थिए। उनले धेरै वर्ष सम्म अकादमी मा अभ्यास गरे, विभिन्न युवा स्तरहरु मार्फत गुजरें र बाटो मा धेरै खिताब जीते।
उस्ले छोड्यो एफसी बार्सिलोना 2003-04 सिजनको अन्तमा म्यानचेस्टर युनाइटेडमा। प्रीमियर लीग पक्षले Piqué को लागि शुल्क तिर्न सक्दैन किनकि एक पेशेवर अनुबंध गर्न धेरै युवा थिए।
27 मई 2008, Piqué फिर्ता गए र बार्सिलोना संग € 4NUMX मिलियन खरीद-आउट क्लज संग एक चार वर्षको सम्झौता हस्ताक्षर गरे। उनले आफ्नो बाल्यकाल क्लब संग पुनः साइन-इन गरे, उनको पनि मैनचेस्टर यूनाइटेड मा उनको जादू को मजा ले स्वीकार गरे। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -सम्बन्ध जीवन
शुरुआती 2011 पछि, Piqué कोलम्बिया गायक शकीरा संग एक सम्बन्ध मा भएको छ। एक शक बिना, शकीरा र गेरार्ड ग्रह मा सबैभन्दा प्रसिद्ध सेलिब्रेटी जोडाहरू छन्। आउनुहोस् कि तिनीहरू कसरी प्रेममा सँगै आए।
Gerard Pique र Shakira
जब दुई वैश्विक हस्तक्षेपहरू सँगै आउँछन्, यो प्रायः प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हप्पलको विषय हुन्छ। शकीरा र स्पेनी फुटबलर जेरार्ड पिइकको कथा यस्तै यस्तै छ।
हामी प्रायः Waka Waka गीतलाई अफ्रिकामा 2010 फुटबल विश्व कपको दौडान प्रसारित गर्ने सम्झना हुनेछौं। यो कि टूर्नामेंटको आधिकारिक गीत YouTube मा 1.6 अरब दृश्य भन्दा अधिक, शकीरा द्वारा लिखित र प्रदर्शन गरिएको थियो।
गीत जो पिक र शकिरा सँगै ल्याईयो
Gerard भिडियोको पनि एक भाग थियो। यस भिडियो को फिलिम को समयमा शकीरा र पिक को मिलेन र दुई सावधानी देखि तुरन्त हिट। उनीहरूलाई स्क्रिनमा देखा पर्दा हेरेर Gerard Pique को हौसलाले रोमांचित थियो "वाका वैका (यो अफ्रिकाका लागि यो समय)"।
'Waka' गीतमा गेरैर्ड पिइकको एक झलक
पिक उनको लागि आदर्श व्यक्ति थियो। उनीहरूले उनको हृदयलाई म्यानपावर-एन्टोनियो डे ला रुआसँग आफ्नो सम्बन्धको एक्सएनएनएक्सएक्स-रिसेप्टमा भत्काइयो भने उनीहरूको हृदय थियो।
दुईको रूपमा गलत सम्बन्धको रूपमा उनीहरूको सम्बन्धको बारेमा दुईवटा खारेज गरियो। तथापि, विभिन्न स्पान्सेली मिडियाका बारेमा सम्भावित कुराकानीको बारेमा छलफल भयो। धेरै गपशप पत्रिकाहरूले जोडाको तस्वीरहरू हातमा राखे र बार्सिलोनामा चुम्बन गर्थे। जोडा मार्च 2011 मा उनको सम्बन्ध संग सार्वजनिक भए जब शकीरा उनको ट्विटर र फेसबुक मा पुष्टि गरे।
Piqué र शकीरा त्यहि जन्मदिन साझा गर्दछ तर तिनी 10 वर्षको वरिष्ठ छन्। जोडीलाई मायामा परेको कारणको कारण। दुवै प्यारबारीहरूसँग शाही विवाह थियो।
Gerard Pique र शकीरा को रयल वेडिंग
पछि छोराछोरीलाई आशिष् दिइयो। शकीराले जेएनएमएक्सक्स जनवरी 22 मा जोडेको पहिलो पुत्र, मिलान पिक्व मेबाराकलाई जन्म दिए बार्सिलोना, स्पेन, जहाँ परिवारले निवास निवास गरेको थियो। शिकिरले 29 जनवरी 2015 मा आफ्नो दोस्रो छोरा, साशा प्यूक्व मेबाराकलाई जन्म दिए। तल गारर्ड पिइक, शकरि र उनीहरूको बच्चाहरु को एक सुन्दर तस्वीर हो।
Gerard Pique परिवार फोटो
शरिर एक पटक गेरर्डको बारेमा टिप्पणी गरे: "मलाई थाहा छ उहाँ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जो मेरो साथ हुनुहुन्छ किनभने हाम्रो एकताबद्ध प्रेम भन्दा अर्को कुनै चासो छैन।"
पप स्टारले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न फुटबललाई पनि धन्यवाद दिए र जेरार्डमा यसलाई ल्याउन मद्दत गर्यो। एक्सएनएक्सएक्स फुटबल विश्व कप को समापन समारोह को लागी एक साक्षात्कार मा, शकीरा ले टिप्पणी गरे: "म कहिल्यै बिर्सिन सक्दिन कि म विश्व कपमा मेरो जीवनको प्रेम भेट्टायो।"
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -पारिवारिक जीवन
फुटबल प्रायजसो एक रङ्ग-टू-धन खेलिन्छ। प्रायः खेलाडीहरुले कुनै न कुनै अप्ठ्यारोहरु को कथाहरु लाई साझा गरेको छ र खेल को उनको धेरै धन लाउन को लागि धन्यवाद गर्न को लागि। यो Gerard Pique को मामला छैन किनभने उनी सुपर उच्च-कक्षाको पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछन्। तलको चित्रले आफ्नो कातालान प्रथम श्रेणीको परिवारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। नोट: मार्क Piqué उनको बच्चा भाइ अनुपस्थित छ।
फेथर: गेरार्डको बुबा जोआन पिकिकले बारम्बार बार्सिलोनाको सबैभन्दा सफल वकील र व्यापारीको रूपमा मानिन्छ। तल जोआन पिक र उनको प्यारा मोन्टसेराट को एक तस्वीर हो जसलाई उनले आफ्नो जवान मा विवाह गरे।
जोआन पिक र उनको सुन्दर पत्नीको फोटो
यसको बारे मा गर्डर्ड पिकीको आमा: Pique's mother, Montserrat, बार्सिलोना मा एक प्रमुख अस्पताल निर्देशक हो जो स्पाइनल चोटहरु संग सम्बन्धित छ।
मोन्टसेराट पहिले बार्सिलोनाको प्रतिष्ठित Gttmann संस्थानको Acquired Brain चोट इकाईको प्रमुख थियो। उनले सेरिबरोसुलर रोगहरु संग रोगियों को पुनर्वास मा प्रमुख चिकित्सा सम्मान जीता छ।
Piqué आमा र शकीराको मासु राम्रो हुन सक्छ खेलकूद टिप्पणीकर्ता। यो Monserrat आफ्नो जेठो बच्चाको खेलको विकास वर्णन छ: "उहाँ चाँडो छ, उहाँले तिनीहरूलाई सबै उठाउनुहुन्छ, उहाँले बल बाहिर लिन्छ र एक मा एक मा सुधार भएको छ"। मोन्टसेर्राट स्वीकार्छ कि कहिलेकाहीँ उनीहरु बर्षहरु को लागी उत्साहित छन् जुन Piqué (2004-2008) मैनचेस्टर युनाइटेडको लागि खेलेका थिए, खास गरी जब उनले 17 वर्षको साथ हवाईअड्डामा छोडे। उनको शब्दहरुमा ..."म उनको अंग्रेजी यात्राको चार वर्षको दौडान महिनामा एक पटक भेट्न सकें।"
मोन्टसेराट डिजिटल क्यामेराको साथ आफ्नो छोराको बारेमा सबै रेकर्डिङको शौक हो। उनले एक पल्ट भने कि उनी पिकू को घर मा फर्कने फिर्ती को लागि मुख्य जिम्मेदार थिए, पहिले जर्जगोजा मा र उनको प्रिय बेराका मा। Monserrat आफ्नो बहू को नजिकै धेरै नजिक छ, शकीरा को रूप मा तल चित्र मा देख्यो।
Monserrat र उनको छोरी बेकार
भाइरस: Gerard Pique मा एक सानो भाई मार्क पिक छ, जो उनको सबै भन्दा ठूलो प्रशंसकहरु र समर्थक को एक छ।
Gerard Pique को भाइ मार्क मार्क
GRANDFATHER: एम्डोर बरेबेउ जेरार्ड पिइकको आमा, मोन्टेरातटका पिता हुनुहुन्छ।
Gerard Pique को दादा - अमाडोर बर्नबेउ
उहाँ बार्सिलोनाको पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। कालोलोनियामा विवादास्पद 2017 स्वतन्त्र रेफ्रिजमलमा, उनी तर्क, कातालान पक्षका सार्वजनिक अनुहारहरू मध्ये एक जनाको रूपमा देखाइएको थियो र कातालानमा उनीहरूको समर्थन ट्वीटर गर्दै थिए। त्यसपछि तिनले कातालानका स्वतन्त्र सर्वेक्षणका समर्थनको लागि केही स्प्यान्सी फ्यानहरूबाट फर्किन थाले। उनको लागि धन्यवाद, Piqué को एक अझै पनि अनसुलझे सपनाहरु को राष्ट्रपति बननु हो एफसी बार्सिलोना।
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -व्यक्तित्व
Gerard Pique उनको व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषताहरु छ।
Gerard Pique को शक्ति: उहाँ प्रगतिशील, मूल, स्वतन्त्र र मानवअधिकार हुनुहुन्छ।
Gerard Pique's Weaknesses: उहाँसँग भावनात्मक अभिव्यक्तिबाट चल्ने आदत छ। शंकर तथापि यो 2011 पछि काम गरे।
जेरार्डको मनपर्ने मनपर्छ अरू साथीहरूलाई सहयोग गर्न साथीहरूसँग मजा गर्न मनपर्छ। उहाँ पनि एक सुनेको हुनुहुन्छ।
क्या Gerard पिकनिक नापसंद: Gerard Pique ले अकेला र टूटी वादाहरू मन पराउँदैनन्।
सामान्यतया, त्यो शर्मीला र शान्त छ। उहाँ गहिरो विचारधारा पनि हुनुहुन्छ र उहाँका वरिपरिका ऊर्जाहरू अनुकूल गर्न सक्नुहुन्छ। यो सामान्य छ जब तपाई उसलाई उनीहरूको टीमको लागि खेल्नुहुन्छ। Pique बिना पूर्वाग्रह देख्न सक्षम छ, दुवै पक्षमा, जसले उनलाई संघर्षको समाधान गर्न क्षमता दिन्छ।
अन्ततः, जेरार्ड पिकले विश्वको सम्भावना पूर्ण ठाँउको रूपमा हेर्छ।
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -एनिमेटेड तथ्यहरू
उसले बन्दूकलाई माया गर्छ Luis Suarez.
जबकि त्यो संग नरम हुन्छ लिओनेल मेस्सी, Pique र डेन अल्व्स आफ्नो शक्ति र शारीरिक विशेषताहरु प्रतियोगिता गर्न प्यार।
पछिल्ला दिनमा, लेजेंन्डरी कार्ल्स पुइलले धेरै अवसरहरूमा पिक अनुशासन गरे। यो खेलको पिचमा आफ्नो चरित्र shapping मा यो साधन थियो।
तिनी अझै पनि आफ्नो बचपनको सबै भन्दा राम्रो एनिमेटेड पात्र द्वारा लिइन्छ।
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -उनको उपनाम बारे
Gerard Pique को पूरा नाम हो - Gerard Piqué Bernabéu - खुसीसाथ, नाम 'बर्नबेउ' रियल म्याड्रिडमा एक नामको पर्याय हो, उनीहरूको महान राष्ट्रपति, सैंटियागो बर्नबाय येटेको लागि धन्यवाद।
स्यान्टियागो बर्नबाय येस्ते रियल म्याड्रिडको उदयको लागि उत्तरदायी थियो जसले गर्दा उनको स्टेडियम उनको नाम राख्यो।
तथापि, जब तपाईं गेर्डर्डिक्सको आखिरी नामहरुमा धेरै नाम देख्नुहुन्छ, यो तपाईंलाई आश्चर्य लाग्यो कि यो मानिस मूलतया म्याड्रिड-हटिङ गर्ने कातालान हो। यस लेखमा पहिले नै उल्लेख गरिएको रूपमा, नाम उनको आमाको छेउबाट आउँछ, जो बार्सिलोनाको पूर्व राष्ट्रपति, अमोद बर्नबेउ हो। त्यसैले अहिले हामी जान्दछौं: बर्नबायोसले स्पेनको ठूलो दुई ठूलो शासन गरे।
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -उहाँले लेडी गागा र यूएक्सएनमक्स रक बैंडलाई प्रेम गर्नुहुन्छ
ठीक छ, जाहिर छ, यस संसारको लगभग सबै कुनै प्रकारको संगीत सुन्नेछ।
यो एक राम्रो स्वीकृत सहमति हो कि सबैको आफ्नै संगीत प्राथमिकताहरू छन्। र Gerard पिیک - अर्को मानव हाम्रो जस्तै - आफ्नै हो, पनि।
शकीरा उनको अर्को आधा हो कि, एक उहाँलाई तिनको प्रियको प्रशंसक हुन चाहानुहुन्छ, जसलाई उहाँ निश्चित रूपमा तस्वीर आकृतिको रूपमा हुनुहुन्छ। यद्यपि, उहाँसँग अन्य संगीत छनौटहरू छन्; यिनी मध्ये केहि लेडी गागा, यूएक्सएनएमएमएक्स र रिहाना शामिल छ। उनको प्लेलिस्ट उनीहरूको गीतहरू भरिएका छन् र उनीहरूको खेललाई खेलकुद अघि र पछि पछि विश्रामको रूपमा प्रयोग गर्छन्।
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -उहाँका मूर्तिहरू
Gerard Pique ले धेरै वर्षहरु लाई जर्मन किंवदंती, फ्रान्ज बेकेनबाउर लाई समानता देखाउँदछ, यस प्रकार बलिदान कमाई "Piquénbauer"। जब प्रशंसक फ्रान्जि बेकेनबाउरले समानांतरको बारेमा तयार पारेका थिए, तब पौष्टिक जर्मनले भने कि उनी थिए "सम्मानित" त्यो स्पानीर्ड उहाँसित जोडिएको थियो। तल पिक र उनको आइडल, बेकनबाउर आफ्नो आफ्नै तस्बिरहरू आदान प्रदान गर्दै छन्।
Gerard Pique र फ्रान्ज Beckenbauer
तर, तथ्यलाई विचार गरौं कि उसले ग्यालिकिकसलाई पराजित गरिरहेको छ, यसले यसलाई एकदमै अचम्म लाग्दछ र रियल म्याड्रिड किंवदंती 'हिरोरो' नामको दोस्रो आइकनको रूपमा फेला पार्न खोज्छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो एंडी क्यारोल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।
अधिकतम कुमार 8 मे, 2018 1 मा: 06 बिहान
राम्रो लेख धन्यवाद धन्यवाद vry राम्रो प्लेयर को बारे मा लिखित